Hepatitis B - एक भाइरल रोग अक्सर कलेजो क्षति र अन्य जटिलताहरु निम्त्याउँछ। बारेमा 2,50,000 पुरानो कलेजो रोग देखि प्रत्येक वर्ष मर्ने जो को भाइरस, संक्रमित भएका 350 लाख मान्छे को संसारको जनसंख्या बीचमा। प्रत्येक वर्ष hepatitis B को 50 लाख नयाँ अवस्थामा सम्म एक्लै रूस मा दर्ता, र कुल मा भाइरस को बारेमा5लाख वाहक छन्।
"पीलिया" hepatitis B बिरुद्ध टीका भाइरस रोकन मात्र विश्वसनीय विधि हो। यो कहिलेकाहीं विशिष्ट लक्षण दिनुहुन्छ जो एक खतरनाक संक्रमण छ। रोग संग सम्बन्धित हुन सक्छ गरिब स्वास्थ्य, फैटी खाद्य पदार्थ, कलेजो रोग, खुजली र छाला को पहेंलो गर्न शरीर को सामान्य कमजोरी, भोक, अनिच्छा। दुर्भाग्यवश, hepatitis को एक तीव्र फारम सधैं curable छ, र अवस्थामा को 5-10% पुरानो हुन्छन्। त्यसपछि यो cirrhosis र कलेजो क्यान्सर निम्त्याउन सक्छ। चरम अवस्थामा, कलेजो क्षति मृत्यु सक्छ भनेर गम्भीर हुन्छ।
Hepatitis B को प्रकार
Hepatitis B त्यहाँ धेरै प्रजातिहरू छन् र दुई पक्षबाट प्रकट भएको छ:
को तीव्र फारममा hepatitis भाइरस को प्रसारण पछि तुरुन्तै विकास र व्यक्ति गम्भीर लक्षण छ। केही अवस्थामा, रोग fulminant भनिन्छ गंभीर र जीवन खतरामा फारम बन्नेछ। थप वयस्क विरामीहरु को 90% संग तीव्र hepatitis सी सफलतापूर्वक उपचार भन्दा, अरु रोग पुरानो बन्नेछ।
यस नवजात बच्चा अवस्थामा को 95% मा आमा बाट hepatitis अनुबंधित यदि रोग पुरानो फारम जान्छ। रोग एक फारममा लक्षण खुलारूपमा फरक र बिना पुरानो hepatitis, cirrhosis बित्दै जाँदा को सक्रिय चरण सम्म कुनै पनि लक्षण, वाहक को एक विस्तृत दायरा भित्र फरक हुन सक्छ। यो कलेजो ऊतक को एक विशेष राज्य द्वारा विशेषता गम्भीर रोग हो। त्यहाँ आधारभूत शरीर कार्यहरु संरचना परिवर्तन, खत अंश को गठन, जसबाट उल्लङ्घन हो।
HCV संक्रमण बाटो
को hepatitis B भाइरस भाइरस संक्रमित एक रोगी को सबै शरीर तरल पदार्थ पाइन्छ। सामग्रीको सबैभन्दा ठूलो रकम रगत, वीर्य, योनी स्राव अधिकार। को पसिना मा एकदम कम भाइरस, लार, आँसु, मूत्र, र शारीरिक मानव अन्य स्राव।
भाइरस सम्पर्क mucosal सिधै प्रसारित वा मानव विरामीहरु को जैविक तरल पदार्थ को छाला भाग क्षतिग्रस्त भएको छ।
hepatitis B विरुद्ध खोप
सबैभन्दा देशहरूमा, hepatitis B टीका एक चिकित्सा सुविधा हुन आवश्यक छ। सर्व महत्व आफ्नो जीवन को पहिलो दिनमा भाइरस बाट नवजात शिशुहरु को खोप छ। पक्का खोप र जस्तै जनसंख्याको ती विभाग, छन् पनि बनाउन:
आवश्यक रोगहरु विरामी नसों को प्रशासन इंजेक्शन, रगत सार्ने काम वा hemodialysis;
सबै चिकित्सा संस्थाहरु को कर्मचारी;
पूर्वप्राथमिक र उच्च विद्यालय विद्यार्थी;
hepatitis B को पुरानो गाडी संग परिवारका सदस्यहरूले;
व्यक्ति अक्सर एक उच्च घटना दर संग क्षेत्रमा यात्रा;
कहिल्यै भएको मान्छे भाइरस विरुद्ध खोप गर्न।
जोखिम विभाग को कुनै पनि मा फिट नगर्ने ती, को hepatitis B टीका आफ्नो अनुरोध मा प्रबन्ध छ। यो हदसम्म मूल्यांकन भ्रमण कसरी बारम्बार दन्त र कस्मेटिक सर्जरी, मैनीक्योर, दोकान सैलून, वितरण र अंक आधारित घूस गर्न रगत रगत सार्ने काम र यति। डी यो संक्रमण को मुख्य मार्ग यौन सम्पर्क, निश्चित गरिनु पर्छ hepatitis B टीका हो कि सम्झना गर्नुपर्छ नियमित यौन साझेदार को अभाव मा।
यो खोप तालिका
hepatitis B विरुद्ध खोप जीवनको पहिलो वर्षमा तीन पटक intramuscular इंजेक्शन द्वारा बाहिर छ, र त्यसपछि यो '14 मा एक किशोरी को जीवन मा 0-1-6 महिना को एक अन्तराल संग दोहोर्याइएको छ। hepatitis B विरुद्ध खोप सुरक्षा एंटीबडी जीव को उत्पादन गर्न जान्छ। प्रक्रिया पनि 14 को उमेर स्वास्थ्य कार्यकर्ता र, पुरानो रोग संग चिकित्सा विद्यार्थी, विरामीहरु र आफ्नो वरपर ती अघि खोप गर्ने गरेका छैनन् गरिएको व्यक्ति गरेको छ। भाइरल hepatitis अवस्थामा को 5-10% cirrhosis वा कलेजो क्यान्सर नेतृत्व गर्न सक्छ पुरानो, बन छ।
Hepatitis B खोप धेरै चरणमा बाहिर छ। यो प्रक्रिया सबै बच्चाहरुका लागि अनिवार्य छ। यो खोप तालिका:
पहिलो खुराक - जन्म पछि, बच्चालाई टीका intramuscularly पहिलो दिनमा इंजेक्शन;
दोस्रो खुराक - उमेर 6-8 सप्ताह, टीका intramuscularly प्रबन्ध छ;
तेस्रो खुराक - जीवन टीका को 7th महिना साथै प्रबन्ध छ।
hepatitis B तथाकथित दीर्घकालीन प्रतिरक्षा स्मृति द्वारा विशेषता, अर्थात् विरुद्ध विधिहरू शिशु खोप एक उच्च तहमा कायम लामो समय को लागि एंटीबडी को टीका प्रशासन पछि। त्यहाँ खसेको छ भाइरस गर्न संक्रमण र प्रतिरोध को एक जोखिम छ भने, पुन खोप लागि आवश्यक छ।
एक नवजात HCV गर्न सबैभन्दा संवेदनशील बच्चा। संक्रमण यो अवधि, 100% पुरानो बढ्छ लागि प्रगति को जोखिम मा देखा परेको छ भने। तर यो उमेर मा Serums र सुइहरु सिर्जना गर्न नै प्रतिरक्षा कारक मा, यो सबै भन्दा लगातार छ।
बच्चाहरु तुरुन्तै जन्म पछि मा खोप प्रसूति अस्पताल। थप दुई पटक - एक महिना पछि र पहिलो खोप पछि छ महिना। hepatitis B विरुद्ध खोप आफ्ना छोराछोरीको क्लिनिक हुनुपर्छ। उचित खोप योजना अंतराल बिना प्रदान 100% प्रतिरक्षा conserved, कम्तिमा पन्ध्र वर्ष।
त्यहाँ अवस्थामा hepatitis B टीका एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदान गर्छ जहाँ छैनन्। यो कुल जनसंख्याको मान्छे को 5% छ। त्यसपछि तपाईं अन्य एक टीका र अन्य प्रजातिका खोप प्रयोग, भाइरस विरुद्ध सुरक्षा गर्न तरिकाहरू गर्न आवश्यक छ।
hepatitis B विरुद्ध इंजेक्शन, रूस अनुमति
मिति, भाइरस विरुद्ध सुरक्षा गर्न मानव शरीर मा परिचय लागि आधुनिक पदार्थ र तयारी विकास गर्न। रूस मा, hepatitis B विरुद्ध खोप "Engerix-बी" प्रयोग "Regevak बी", "Eberbiovak एचबी", विज्ञान-बी-Vac, यी लागूपदार्थ मुख्य रूप मा purified hepatitis B भाइरस सतह antigens आधारित निर्मित छन् पुनःसंयोजक खमीर hepatitis बी विरुद्ध खोप एल्यूमीनियम हीड्राकसीड मा अवशोषित प्रजनन खमीर कक्षहरू मार्फत आनुवंशिक ईन्जिनियरिङ् प्राप्त। यी सुइहरु HBsAg प्रतिजन विरुद्ध विशिष्ट एंटीबडी को उत्पादन induce। क्लिनिकल परीक्षा अनुसार, यी एजेन्ट संग खोप जोखिममा शिशुहरू, छोराछोरी र वयस्क को 95-100% मा रोग विरुद्ध प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान गर्दछ। को प्रतिजन पत्ता जो शिशुहरू र आमा, को 95% पूर्ण खोप योजना 0, 1, 2, 12 महिना पछि hepatitis B संक्रमण विरुद्ध सुरक्षित। वा 0, 1,6महिना। अप प्रदर्शन 15 वर्ष, योजना 0, 1,6महिना अनुसार खोप। गर्न स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई मा, एक सुरक्षा एंटीबडी स्तर पहिलो खोप देखि सात महिना पछि छ। तर, अझै पनि पूर्णतया बुझे छैन भनेर लागूपदार्थ छन्। उदाहरणका लागि, लागूपदार्थ "Euvaks" आज रूसी संघ प्रयोगको लागि, यो भियतनाम मा धेरै बच्चाहरु को मृत्यु को कारण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको।
Contraindications र साइड इफेक्ट
टीका तिनीहरूलाई को निशान हुनसक्छ रूपमा hepatitis B विरुद्ध खोप, रोटी गरेको खमीर घृणाको को रूप मा मात्र contraindication छ। साथै, पहिले शिशुहरू टीका एक कम प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हुन सक्छ। त्यसपछि hepatitis B टीका2किलो गर्न बच्चाको वृद्धि वजन सम्म सौतेली गर्नुपर्छ।
कहिलेकाहीं खोप ज्वरो पछि, एक वा दुई दिन हुन्छ साधारण रोगहरु सँगसँगै। धेरै शायद urticaria को रूप मा एलर्जी प्रतिक्रिया अवलोकन।
यो गर्भावस्था र lactation खोप गर्न निरपेक्ष contraindications छैनन् महत्त्वपूर्ण छ। यस मामला मा, सिफारिस खोप प्रत्यक्ष ब्याकटेरिया, virulence को deprived। चेचक, रूबेला, ठेउला, चेचक, क्षयरोगका पनि गर्भावस्था को समयमा निम्न संक्रामक रोगहरु विरुद्ध सुइहरु प्रबन्ध गरिएको थियो।
कसरी घर मा खराब सास को छुटकारा प्राप्त गर्न?
मौखिक गुफाको कार्य र संरचना
तपाईं पेट बच्चालाई गरेको सेक्स निर्धारण कसरी जान्न चाहनुहुन्छ?
यस्तो कठिन निदान VSD
Depilation क्रीम घनिष्ठ क्षेत्रमा: चयन गर्न के?
कास्टल - माछा उपयोगी
प्रेरणा पैन: एक सिंहावलोकन, विनिर्देशों, निर्माता र समीक्षा
Goethe संस्थान (सेन्ट पीटर्सबर्ग)। भाषा पाठ्यक्रम
पन्नी मा ओवन मा सुखा अचम्मको ट्राउट,